မူးလဲတော့မည်ဆိုလျှင် - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
- ထိုင်ချလိုက်ပါ။ မူးလဲတော့မည့် အချိန် ထိုင်ချရန်ဝန်လေးနေလျှင် လဲ ကျ၍ဦးခေါင်းထိခိုက်မိသည့် အန္တရာယ် ကြုံရတတ်သည်။
- အသက်ပြင်းပြင်းနှင့်ရှည်ရှည်ဆွဲရှူပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲ ခြင်းများမဖြစ်အောင် အသက်ရှည် ရှည်ရှူခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်။
- အကူအညီတောင်းပါ။ တတ်နိုင် သလောက် ကျယ်ကျယ်အော်ပါ။ မူးလဲခါနီးလျှင် နားအူနေသည့် အတွက် မိမိအော်သံကို တိုးတိုးသာ ကြားရတတ်ပါသည်။ စိတ်မပျက်ဘဲ ဆက်၍အကူအညီတောင်းခံပါ။
- ခြေထောက်ပိုင်းကို ဦးခေါင်းပိုင်း ထက် အမြင့်တစ်နေရာတွင်ထား၍ ပက်လက်အိပ်နိုင်မည့်နေရာသို့ လိုက် ပို့ခိုင်းပါ။ အချိုဓါတ်ရနိုင်မည့် သကြား လုံး၊ အချိုရည်တစ်ခုခု ကူညီရှာဖွေ ခိုင်းပါ။
- ရံဖန်ရံခါသတိမေ့သွားသည့်အခါ သတိပြန်ရလာချိန်တွင် အလန့်တ ကြားဖြစ်သွားတတ်သည်။ မိမိဘာ ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုလည်း မေ့နေနိုင်သည်။ အချို့လူများ၌ သတိမေ့နေစဉ်တွင် ဆီးထွက်ကျသည်အထိ ဖြစ်တတ် သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတိပြန်ရလာ ချိန်တွင်တတ်နိုင်သလောက် စိတ် အေးအေးထားပါ။
- သတိပြန်ရလာချိန်တွင် တန်းမ ထပါနှင့်။ ခဏထိုင်၍ ခေါင်းမူးခြင်း ရှိ/ မရှိစောင့်ကြည့်ပါ။
- သင့်လျော်သည့်အချိန်၌ ဆေးခန်း ပြ၍ မူးလဲသည့်ပြဿနာနောက်ထပ် ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိအောင် ကာကွယ်ပါ။
- မူးလဲခါနီးဖြစ်ပေါ်တတ်သည့် အောက်ပါလက္ခဏာများကို မှတ်သား ၍ နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် အကာအကွယ်ချက်ချင်းရယူပါ။
- အဖြူစက်၊ အနက်စက်များ တွေ့လာရခြင်း
- ခေါင်းတစ်ခုလုံး ပေါ့ပြီး ပတ် ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး လည်နေခြင်း
Mar 2017 ( 584 )
ဦးနှောက်ဆဲလ်အပိုကြောင့် ယောကျာ်းတွေဟာ အရာရာထက် အချစ်ကိုဦးစားပေး
ယောကျာ်းတွေဟာ ကာမအကြောင်းကို ၆ စက္ကန့်တိုင်းမှာ တွေးလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ တချို့ယောကျာ်းတွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ ကာမ က တကယ်ရှိကြောင်းကို ...
Gym ကစားခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ
လူအများစုဟာ gym ကစားကြတဲ့ အချိန်မှာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကစားကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ ၀ိတ်ကျချင်လို့ ၊ တချို့ကတော့ လူတိုင်းငေးကြည့်ရတ...
ဘက်တီးရီးယား ကင်းစင်တဲ့ လက်တွေဖြစ်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာ ဆေးကြော သင့်သလဲ?
သင့်ရဲ့ လက်တွေ သန့်ရှင်းရဲ့လား? သေချာတာကတော့ သင် အိမ်သာကထွက်လာတိုင်း လက်ဆေး ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သင့်လက်တွေကို ဆေးကြောတဲ့အခါမှာ ဘယ်လောက် ...
နေ့စဉ် လိမ္မော် ဖျော်ရည် သောက်သုံးခြင်းဟာ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက် ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့ သုတေသန တစ်ခုက အခိုင်အမာ...